ကောင်းကင်ရဲ့ သမီးပျို: မာလီ
၁၉၉၂ခုနှစ်မှာ မာလီဆိုတဲ့သူ့မ ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ် ။ သူဟာ Haiti သူ ချစ်စရာ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါ ။ မာလီတို့ မိသားစုက ဆင်းရဲပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် မာလီတို့မိသားစုလေးက စည်းစည်းရုံးရုံးနဲ့ ချစ်စရာ ဘ၀လေးတော့ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ပေါ့ ။ သူမမှာ အမတစ်ယောက်နဲ့ ညီမ တစ်ယောက်လည်း ရှိသေးတယ် ။ မာလီ ရဲ့နာမည်ကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကြည့်မယ် ဆိုရင် “စိမ်းလန်းစိုစွတ်နေတဲ့ မြက်ခင်းပြင်လေး “လို့ မည်တွင်ပါတယ်တဲ့ ။ အေးချမ်းမယ့် မာလီလေးပေါ့နော်...။ သူမ ရဲ့ဘ၀လေး အေးချမ်းဖို့အတွက် ရည်ရွယ်တယ် လို့ထင်မိပါတယ် ။
မာလီလေးဟာ တခြားကလေးတွေလို ပုံမှန်အနေအထားအတိုင်းပဲ ကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် အရပ်အမောင်း ကစလို့ အားလုံး ပုံမှန်ဆိုပါတော့ ။ ထူးခြားတာက မာလီလေးရဲ့ ၅နှစ် နဲ့ ၈နှစ်ကြား ကာလတွေ ပါပဲ ။ သူ့မရဲ့ မျက်နှာမှာ တစ်ခုခုကို ခံစားမိပါတယ်တဲ့ ။ အထူးသဖြင့် နှာခေါင်းရိုး တလျှောက်ပါတဲ့ ။ မာလီလေးဟာ သူမရဲ့နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းရတဲ့နေ့ရက်တွေကို ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက် လျှောက်လှမ်းခဲ့ပါတယ် ။ မာလီလေး ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်လာချိန်မှာတော့ မျက်နှာပေါ်မှာ ယောင်သလိုလို ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီ အသားစိုင်လိုလိုလေးဟာ တစ်နေ့တခြား ကြီးထွားလာခဲ့တယ် ဆိုပါတော့ ။
ပုံမှာ မြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ ။ သူမရဲ့ ညာဘက် ပါးပြင်တစ်ခြမ်းမှာ အသားစိုင်လိုလို ယောင်ယမ်းနေပါတယ် ။ ဒီအဖုလေးဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဆ ထပ်တိုးလို့ ကြီးထွားလာခဲ့ပြန်ပါတယ် ။ မာလီရဲ့ အခုလို အခြေအနေဟာ သူမကို အရှက်ရစေခဲ့တာအသေအချာ ပေါ့ ။ သူမရဲ့ ဒီလိုအခြေအနေတွေက သူမကို လူတွေနဲ့ဝေးရာကို တွန်းပို့လိုက်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ ။ ဆယ်ကျော်သက် မာလီလေးဟာ လူ တွေကို ရှောင်တတ်လာတယ် ။ သူကလေးရှက်တတ်နေပြီလေ ။ ဒီလိုနဲ့ မာလီ ဟာ အိမ်မှာပဲ အနေများခဲ့ပါတယ် ။ ဆင်းရဲ့လှတဲ့ မာလီတို့မိသားစုလေးက မာလီကို ဘာလုပ်ပေးရမှန်း မသိအောင် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် တဲ့..။
မာလီ ၁၄ နှစ် ပြည့်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ကြီးမားလှတဲ့ အသားပိုတွေဟာ မာလီရဲ့ မျက်နှာပြင် တစ်ခုလုံး ဖုံးအုပ်လု နီးပါး ဖြစ်လာပါတယ် ။ ဆိုးရွားလှတဲ့ အသားပို ရောဂါကို မာလီလေး ခံစားနေရပါပြီ ။ ၁၆ ပေါင်ရှိတဲ့ အသားပို တွေဟာ မျက်နှာတစ်ခုလုံး ဖုံးအုပ်တော့မှာပါ ။ ဒီအသားပိုတွေကြောင့် နှာခေါင်းလမ်းကြောင်းတလျှောက်နဲ့ ပါးစပ် တ၀ိုက်ကို အဓိက ထိခိုက်စေပါတယ် ။ တဖြည်းဖြည်းကြီးမာလာတဲ့ ဆဲလ် တွေကြောင့် နှာခေါင်း လမ်းကြောင်း ဟာ ကျဉ်းမြောင်းလာပါတယ် ။ အသက်ရှုဖို့ သိပ်ခက်ခဲနေတဲ့ မာလီလေးဟာ တစ်ခုခုစားဖို့ကို လည်း မနည်း ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ် ။ လမ်းကြောင်းတွေဟာ သိပ်ကိုကျဉ်းမြောင်း နေပြီလေ ။
ကြောက်စရာကောင်းလှတဲ့ ဒီအသားပိုရောဂါဟာ အသားတွေပိုထွက်ကြီးမားလာခြင်း တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး တဲ့ ။ ခန္ဒာကိုယ်မှာ ရှိတဲ့ အရိုးတွေကို ထိခိုက်စေမယ့်အပြင် ခွဲစိတ်မှု မခံယူဘူးဆိုရင် ....မျက်စိနှစ်ကွင်း အလင်း မရတော့ ဖို့တောင် သေချာနေပါပြီတဲ့ ။ အခု ဆိုရင် မာလီလေးရဲ့ နှာခေါင်းရိုးကြီးထွားမှုဟာ ၁၆ ပေါင် ရှိတဲ့ အစိုင်အခဲ တစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိနေပါပြီ ။
၁၄ နှစ်သမီး မာလီ ရဲ့ အခြေအနေပါ ။ မထင်မှတ်တဲ့ သတင်းတစ်ခုဟာ မာလီကိုကံကောင်းစေခဲ့ပါတယ် ။ Jackson Memorial Foundation ရဲ့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲ တစ်ခုမှာ ကလေးမလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာအသား ပိုတစ်ခုကို အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ်ကုသနိုင်ခဲ့ကြောင်း ကြားသိပြီးတဲ့နောက် မှာတော့ မာလီဟာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကလေး များရန်ပုံငွေ အဖွဲ့ရဲ့ လူနာတစ်ယောက် အဖြစ် ကုသမှုခံယူခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ။
မာလီရဲ့ ရောဂါက polyostotic fibrous dysplasia ပါတဲ့ ။ တိကျစွာ ဘာသာမပြန်နိုင်ပေမယ့် အမျှင်တွေပါဝင် တဲ့ အသားစိုင်တွေပုံမှန်မဟုတ်ပဲ ကြီးထွားလာမှု ရောဂါ တစ်မျိုးပါ ။ အဲဒီရောဂါဟာ ခန္ဒာကိုယ်က အရိုးတွေနဲ့ တစ်ရှူးတွေ ဆဲလ်တွေကို ထိခိုက်စေတဲ့ ရောဂါမျိုးပါ ။ အရိုးတွေနဲ့တစ်ရျူးတွေရဲ့ ကြီးထွားဖွဲ့ဖြိုးလာမှုကြောင့် ရုပ်ပျက်ခြင်း အဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားတာပါ ။
မာလီ ရဲ့အခြေအနေဟာ ခွဲစိတ်မှု အမြန်ဆုံးခံယူသင့်နေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ လယ်ပိုင်းမှာ ပထမဆုံးခွဲစိတ်မှုကို စတင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ။ ၁၇ နာရီကြာ ခွဲစိတ်မှုဟာ ဒေါ်လာ $၄၀၀,၀၀၀ ကုန်ကျခဲ့ပါ တယ် ။ International Kids Foundation( I.K.F ) လို့ခေါ်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ဆိုရင် မမှားပါဘူး ။ ဒီအဖွဲ့အစည်းဟာ Florida နိုင်ငံရဲ့ Miami Jackson Memorial Medical Center ဖြစ်တဲ့ မီယာမီ တက္ကသိုလ် က Holtz လို့ခေါ်တဲ့ ကလေးဆေးရုံမှာ ခွဲစိတ်ခဲ့တာပါ ။
မာလီရဲ့၁၇ နာရီကြာ ခွဲစိတ်မှုက ကြောက်ခမန်းလိလိ ခွဲစိတ်မှု တစ်ရပ်ပါ ။ တော်ရုံဆရာဝန်တွေ မလုပ်နိုင်တဲ့ သိပ်ကိုကြာမြင့် ပြီး စွန့်စားထက်မြက်တဲ့ဆရာဝန်မျိုးမှ အောင်မြင်နိုင်မယ်လို့မြင်မိပါတယ် ။ မာလီရဲ့ ခွဲစိတ်မှုတလျှောက် မှာဆရာဝန် အတော်များများရှိနေကြပါတယ် ။ မာလီရဲ့ မိဘတွေနဲ့အတူ အဒေါ်ဖြစ်သူ ၂ ယောက်က မနားတမ်း ဆုတောင်းပေးနေကြပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် Haiti နိုင်ငံက Haitian တွေ အားလုံးမာလီ့ အတွက် ဆုတောင်းပေးနေ ကြပါတယ် ။
မာလီရဲ့ခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ် ။ မြောက်များလှတဲ့ အသားပိုတွေနဲ့အတူ မာလီစွန့်လွှတ်လိုက်ရ တာက မေးရိုးနဲ့အတူ အားလုံးသော သွားတွေပါ ။ နှာခေါင်းရိုးလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်တဲ့ ။ တိုက်တယ်နီယမ် တွေနဲ့ မာလီရဲ့မေးရိုးကို အစားထိုးကုသ ခဲ့တာပါ ။ စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုက မာလီဟာ ပါးစပ်ပိတ်လို့မရပါ ဘူး ။ ဖြတ်တောက်ခဲ့ရတာတွေ များလွန်းလို့ မာလီရဲ့ မျက်လုံးတွေ နှုတ်ခမ်းတွေကို ပြန်လည်တည့်မတ်ဖို့ မနဲ ကြိုးစားဆွဲယူခဲ့ရပါတယ်တဲ့ ။ နှာရိုးမရှိတော့တဲ့ နှာခေါင်းကိုလည်း ပြန်လည် တည်ဆောက်ခဲ့ကြရပါတယ် ။ အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာ မာလီဟာ အသားပိုတွေ မရှိတော့ပေမယ့် အကျဉ်းတန်လွန်းပြီး ရှည်လျှားလှတဲ့ ချုပ် ရိုးရှည်နဲ့အတူ ပိတ်လို့မရတဲ့ ပါးစပ်တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ မာလီ အဖြစ်ရောက်ရှိသွားပါပြီ ။
အဓိကခွဲစိတ်မှု အောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ မာလီ့ရဲ့ အသားပိုတွေဟာ ထပ်ပြီးကြီးထွားလာစရာ အကြောင်း မရှိတော့ပါဘူးလို့ ဆိုခဲ့ပါတယ် ။ ထို့အတူပဲ ဆရာဝန်များရဲ့ အကြံပြုချက်အရ မာလီ့ရဲ့ မျက်နှာအနေအထား ကစလို့ ပုံမှန်နေသားတကျနီးပါးပြန်ဖြစ်ဖို့ အခြား ခွဲစိတ်မှု ၅ ခု ထပ်မံ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဒီဇင် ဘာမှာတော့ မာလီဟာ ဆရာဝန်များရဲ့ ခွင့်ပြုချက်အရ Haiti မြို့ကသူမရဲ့နေရပ်ဖြစ်တဲ့ Port-au-Prince ကို ပြန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ။
ဒီနှစ် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဂျွန်လမှာတော့ I.K.F အဖွဲ့က သတ္တမမြောက် ခွဲစိတ်မှုအဖြစ် မာလီဟာ အမေရိကန်ကို ထပ်မံ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ် ။ ဒီတစ်ခါခွဲစိတ်မှုမှာတော့ သူမရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်က မလိုလားအပ်တဲ့ အမာရွတ်တွေနဲ့အတူ မျက်နှာပြင်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ခွဲစိတ်မှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် ။ I.K.F အဖွဲ့ကလည်း မာလီ ရဲ့ခွဲစိတ်မှုအတွက် ရန်ပုံငွေအင်အားကိုထပ်မံ ဖြည့်ဆည်းပေးသွားမယ်လို့လည်း သိရပါတယ် ။ Haitian တွေရဲ့ non-profit အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Good Samaritan ကလည်း မာလီအတွက် သွားလာရေး စရိတ်တွေ လှူဒါန်းခဲ့က်ြသလို ဆရာဝန်တွေနဲ့ ပါရဂူတွေက သူတို့ရဲ့ပညာနဲ့အချိန်ယူလှူဒါန်းပေးခဲ့ကြပါတယ် ။
ဒါကတော့နောက်ဆုံးကြားခဲ့ရတဲ့ မာလီရဲ့ ခံစားမှု တစ်ချို့တ၀က်ပါ.....................................
ကျွှန်မရဲ့ ဒီရောဂါအခြေအနေကြောင့် ကျွှန်မ အဖေ မျက်ရည်ကျတာ တွေ့ရတော့ ကျွှန်မကို တော်တော်နာကျင် စေခဲ့ပါတယ် ။ ကျွှန်မမိသားစု ကလည်း ၀မ်းနည်းရသလို ကျွှန်မကိုယ်တိုင်လည်း သိပ်ကို နာကျင်ခံစားခဲ့ရပါ တယ် ။ ကျွန်မ နာကျင်ပေမယ့် ခွဲစိတ်မှုတွေကို မကြောက်ပါဘူး ။ အခုကျွန်မသွားရမယ့် ခရီးဟာ မဆုံးသေးပါဘူး ကျွန်မ ဒီလိုဘ၀မျိုးနဲ့ မနေချင်ပါဘူး ။ ကျွန်မအိမ်ထောင်ပြုချင်တယ် ကလေး နှစ်ယောက်ရဲ့မိခင်အဖြစ် ဆက် လက်ရှင်သန်သွားချင်တယ် ။ တစ်ယောက်က မိန်းကလေး တစ်ယောက်က ယောင်္ကျားလေးပေါ့ အခုတော့ ကျွန်မကို ကြိုက်မယ့်သူတစ်ယောက်မှမရှိသေးပါဘူးတဲ့ ။
မာလီရဲ့ ဖွင့်ဟ၀န်ခံချက်လေးပါ ။ သူမဟာ ခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာ ကြောင့် အားငယ်နေပါတယ် ။ ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်မဖြစ်သေးတဲ့ သူ့မျက်နှာအခြေအနေကြောင့် အပြင်ကို သိပ်ထွက်ခဲပါတယ် ။ တစ်ခါတလေတော့ မာလီဟာ မှန်ရှေ့မှာ အလှပြင်နေတတ်ပါတယ် ။
မာလီက ပြောပါတယ် ။ လူတွေက ကျွန်မကိုမြင်ရင် ကြောက်ကြပါတယ် ။ တစ်ခါက ကျွန်မကိုမြင်ပြီး ကြောက်လို့ ထွက်ပြေးသွားတဲ့ လူတစ်ယောက် ကိုမှတ်မိနေပါ တယ် ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ဒေါက်တာကို ယုံပါတယ်တဲ့ ။
အခုလတ်တလော အခြေအနေကတော့ မာလီဟာ သူ့အကြောင်းတွေကို ပြောပြတိုင်း ငိုပါတယ် ။ မာလီရဲ့ ဆရာဝန်ဟာ မာလီနဲ့အတူ ပန်းခြံတွေကို တစ်ခါတလေ သွားတတ်ပါတယ် ။ မာလီဟာ စကားတော့ မပြောနိုင် သေးပါဘူး ။ သွားတွေ မရှိသေးတာကြောင့်ထင်ပါတယ် ။ စကားပြောရင် တရှဲရှဲနဲ့ မပီသပါဘူး ။ မနဲနားထောင် ရင်တော့ ၀ိုးတ၀ါးလောက်တော့ ကြားရပါတယ် ။ လတ်တလော မာလီရဲ့ အခြေအနေပါ ။
အခုဆိုရင် မာလီဟာ သိပ်ကို ရင်ခုန်နေပါတယ် ။ သူမရဲ့ ခွဲစိတ်မှုက အောက်တိုဘာဆို စပါပြီ ။ အဲဒီခွဲစိတ်မှု ပြီးသွားရင်တော့ မာလီဟာ အစားအစာတွေကို ကောင်းကောင်းမျိုချ နိုင်မှာဖြစ်ပြီး စကားလည်း ပြန်ပြောနိုင် တော့ မှာပါတဲ့ ။ မာလီဟာ သူမရဲ့ မျက်နှာအသစ်ကို မြင်ချင်နေပါပြီတဲ့ လေ ။ုံ
မာလီရဲ့နောက်ဆုံးခွဲစိတ်မှု အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးနေပါတယ် ။ အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင် တော့ သူမ မျှော်လင့်ထားတဲ့ အနာဂတ်အိပ်မက်လေးကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်မလည်း မာလီနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားရင်ခုန်ရင်း နောက်ဆုံးရလဒ်ကို စောင့်မျှော်နေပါ့မယ် ။ မာလီရဲ့ နာမည်လေးလို စိမ်းလန်းစိုစွတ်နေတဲ့ မာလီလေး ဖြစ်ပါစေ ညီမရေ.............
ကနဒါမှာ ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ မာလီရဲ့ ဘ၀ အခြေအနေ နဲ့ သူမရဲ့ ရောဂါအကြောင်းပါ ။ တစ်စုံတရာ မှားယွင်းမှု ရှိခဲ့ရင် သမီးပျိုရဲ့ ချွတ်ယွင်းချက်ကြောင့်သာဖြစ်ပါကြောင်း..........................
မာလီလေးရဲ့ နောက်ဆုံးခွဲစိတ်မှုလေး အောင်မြင်လို့ သူမမျှော်လင့်ထားတဲ့ အနာဂတ်အိပ်မက်လေး ပြီးပြည့်စုံနိုင်ပါစေလို့သမီးပျိုနဲ့ ထပ်တူ ပထမဆုံး ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Wednesday, September 16, 2009 3:50:00 PM
မာလီလေးရဲ့ဝဠ်ကျွေးတွေ ဒီဘဝဒီမျှနဲ့သာ ကုန်ဆုံးလွန်မြောက်ပါစေလို့ ညီမကောင်းကင်၊ ညီမ အိန်ကြယ်တို့နှင့် ထပ်တူ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ။
Wednesday, September 16, 2009 3:57:00 PM
မာလီလေး ခွဲစိတ်မှု အောင်မြင်ပါစေ
ဘ၀ဆက်တိုင်းလဲ ခုလို အဖြစ်ဆိုးမျိုးနဲ့ ကင်းဝေးပါစေ
ကိုယ်တွေနိုင်ငံမှာသာ မာလီလေး လူလာဖြစ်ရင် .. ????
မြန်မာနိုင်ငံသား တယောက်ယောက်များ ဒီလိုဝေဒမျိုး ခံစားခဲ့ရရင် ?????????
ကမ္ဘာအနှံက ကလေးငယ်တွေ ဆင်းရဲ ဒုက္ခတွေက ကင်းဝေးပါစေ .. လူတန်းစေ့ နေနိုင်ပါစေ ...
Wednesday, September 16, 2009 8:35:00 PM
မာလီလေး ခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်ပြီး သူမလိုချင်တဲ့ဘဝလေး အမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းနေမယ်နော်။
မိုးခါးပြောသလိုပါဘဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ .......
Wednesday, September 16, 2009 11:06:00 PM
ဖတ်ရတာ သည်းထိတ်ရင်ဖိုရှိလိုက်တာ သမီးပြိုရယ်...
ဒါပေမယ့် စိတ်ထားကောင်းတဲ့ မိဘတွေ စိတ်ဆင်းရဲတာကို မကြည့်ရက် မမြင်ရက်တဲ့ မာလီတယောက် ဘဝမှာ သူ့ကို ချစ်ခင် အနွံတာခံမယ့် လူတယောက် ပေါ်ပေါက်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်...
ရောဂါတွေကလဲ ထူးဆန်းလိုက်တာနော်။ ဘာဘဲပြောပြော ကံကောင်းပါစေလို့ သူ့ မိသားစုနဲ့ ထပ်တူ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
Thursday, September 17, 2009 5:31:00 AM
မာလီလေးရဲ့ ခွဲစိတ်မှု အောင်မြင်ပြီး
သူ လိုချင်တဲ့ဘဝလေး အမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ သမီးပျိုနဲ့ ထပ်တူ ဆုတောင်းနေမယ်နော်။
Thursday, September 17, 2009 11:34:00 AM
Thursday, September 17, 2009 3:30:00 PM
ဘယ်ဘ၀ ဘယ်ဝဋ်ကြွေး .. ငါပေးဆပ်စရာရှိလို့လဲ .. ဆိုတဲ့ ရတနာနဲ့ နောက်ကောင်မလေး ဘယ်သူပါလိမ့် .. ဆိုထားတဲ့သီချင်းထဲက Rap စာသားလေး သွားသတိရလိုက်တယ်။ =)
Thursday, September 17, 2009 4:09:00 PM
Friday, September 18, 2009 3:49:00 AM
သနားပါတယ်ဗျာ ခွဲစိတ်မှုအောင် မြင် ဖို့ဝိုင်း ဆုတောင်း ပေးကြတာပေါ့....။
လူသားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးအတိုင်း နေထိုင်နိင်ပါစေ
Wednesday, November 18, 2009 7:36:00 AM